ကျန်းမာပျော်ရွှင်စွာ အသက်ကြီးခြင်း » တက်ကြွလှုပ်ရှားစွာနေထိုင်ခြင်း
ဆေးပညာပိုင်းဆိုင်ရာတည်းဖြတ်သူ Dr. Thurein Hlaing Win | ရေးသားသူ Dr. Thant Zin
Update Date ဩဂုတ် 1, 2020 .2mins read
မေ့ပြန်ပြီ….မှတ်ဉာဏ်တွေမကောင်းတော့ဘူးဆိုသူတွေအတွက် နည်းလမ်း (၆) ချက်
မှတ်ဉာဏ်ချို့ယွင်းမှုရောဂါတစ်မျိုး (Alzheimer’s) ရောဂါကို ကာကွယ်ပေးမယ့် အစားအသောက် (၇) မျိုး
ဘေဘီလေးတွေ သီချင်းဆိုခြင်း ကနေ ဘာတွေရရှိမလဲ...... ဘေဘီလေးတွေ သီချင်းဆိုတာကနေ ရနိုင်တာတွေကတော့ အများကြီးပါ။ ဘာတွေဖြစ်မလဲ......
ရင်နှစ်သည်းချာ ဖေဖေမေမေတို့ကမ္ဘာ, ကလေးပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်း ဩဂုတ် 27, 2021 .2mins read
ဆီးချိုရှိသူတွေ ကို ရေဓာတ်ဖြည့်ပေးမယ့် သောက်စရာ (၆) မျိုး
ဆီးချိုရှိသူတွေ ကို ရေဓာတ်ဖြည့်ပေးမယ့် သောက်စရာတွေက ဘာဗတွဖြစ်မလဲ။ ဘယ်လောက်ထိ ကျန်းမာစေဖိုပ ထောက်ကူပေးသလဲ ဆိုတာကို ဆေင်းပါးလေးထဲ ဖတ်ကြည့်ပါ။
ဆီးချို သွေးချို, ဆီးချိုရောဂါ နောက်ဆက်တွဲ ပြဿနာများ မတ် 9, 2021 .2mins read